Ndị dọkịta hụrụ na mmanya nwere ike ịgwọ ọrịa ụbụrụ ma ọ bụ ọrịa prostate - Afrikhepri Fondation
Tuesday, Jenụwarị 26, 2021
Akwukwo osisi cannabis
Ndị dọkịta na-achọpụta na cannabis nwere ike ịgwọ ụbụrụ ma ọ bụ ọrịa cancer prostate
Na-agụ: 9 min
LNdi mmadu amaala cannabis kemgbe Neolithic. Na Egypt oge ochieenwere ederede ederede banyere ọgwụgwọ nke hemp. Ya mere papyrus Ebers (edere 1500 afọ BC) kwuru banyere ojiji nke hempseed iji na-emeso ihe ọkụkụ na-agba ume (usoro no 821, p. 96, 7-8 ahịrị).
N'iburu n'uche, nkwekọrịta kasị ochie nke ahụike (Shennong bencao jing), nke a chịkọtara na mmalite nke oge anyị, kwuru banyere mmanya (Maben 麻 贲, ugbu a dama 大麻) Edebere ya dị ka ọgwụ dị elu dị elu nke ezubere iji mee ka ndụ dị ogologo ("mee ka ahụ dị nro" dị ka nke anwụghị anwụ na-agba n'igwe ojii).
N'otu oge ahụ, n'ógbè Greco-Latin, onye Gris na-asụ botanist Dioscorides kọwara na Site na Materia Medica (ie narị afọ), a otubis emeros (nwanyi), a mata dika afọ sativa :
"Cannabis bụ osisi nke nnukwu ịba uru nke na-eme ka o kwe omume ịkpa eriri ndị siri ike ... Rie ya n'ọtụtụ buru ibu, ọ na-egbochi ịtụrụ ime ụmụaka. Na ihe ọ juiceụ juiceụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ osisi dị mma megide earache ... ”
Ọ bụ otu n'ime osisi izizi nke mmadụ mepụtara, enwere ike ịchọta ya n'ime ihe ịchọ mma ite dị na puku afọ asatọ BC. Ogologo oge a na-eche na anwansi, osisi a dị ịtụnanya nwere ike inye ma eriri siri ike nke anyị na-eme ụdọ, uwe na ọbụlagodi akwụkwọ, mkpụrụ mmanụ bara ụba dabara maka oriri mmadụ, yana resin psychotropic nwere ọgwụ. Ma mgbe ọ kwadochara mmepe nke mmadụ niile ruo ọtụtụ puku afọ, o doro anya na ọ bụ nrụgide nke ọtụtụ mkpọtụ ka amachibidoro hemp. Mgbe mmebi iwu amachibidoro mmanya na United States n'afọ ndị 30, ndị ọchịchị Puritan America nwere mmasi na mmanya ma malite ụlọ ọrụ mgbasa ozi megide osisi ahụ nke a sịrị na ọ nwere kwenyere na ọ bụ ya kpatara ihe karịrị ọkara nke mpụ na obodo ndị dị ka New Orleans. Anyị jikọtara osisi ahụ na "ndị negroes" na ịkpọasị ha na-akpali n'oge ahụ iji mee ka onyinyo na-adịghị mma nke ya sie ike. Ndị nkwado na ndị ọrụ nkwado ụlọ ọrụ ahụ, mkpọsa ahụ amịpụtara ma dugara ọtụtụ iwu na-esochi usoro na-igbochi mmepụta na ojiji nke hemp. Yabụ, na owu, naịlọn, mmanụ ala, na akwụkwọ na-arụ ọrụ nwere ike ịba ọgaranya, na-enwere ọnụnọ nke onye kachasị asọmpi ha.
2 / Cannabis infusion na iwu
Kedu ihe bụ THC?
THC (Δ9 - tetrahydrocannabinol) bụ isi ihe na-akpata ọgwụgwọ ọgwụ nke ụmụ mmadụ. Ọ bụ ụkpụrụ na-arụsi ọrụ ike dị na mmanya na ogige ya dị iche iche. Tetrahydrocannabinol nwere agwa psychotropic.
Ebe ọ bụ na ịma ebe obibi nke afọ 70, hemp ejirila nwayọọ nwayọọ nwetaghachi ọkwá ya. Ọ bụ ọha na eze anabataghị nke ọma, nke a na-atụ anya na ọ bụ ọgwụ na ọnụ ụzọ maka cocaine. Anyị maara ugbu a na ego, amaala na telivishọn bụ ụzọ dị irè karị maka oriri nke ọgwụ ndị dị adị n'ezie, na ịṅụ mmanya ahụ adịghị njọ karịa ọgwụ ndị ọzọ dị nro. N'ezie, ụtaba na-eri ahụ, ịṅụbiga mmanya ókè na obi ụtọ pụrụ ịkpata ọnwụ site n'ịgbabiga anya ókè, ebe ọrịa cannabis adịghị akpata.
Ma n'adịghị ka nkwenkwe ndị a na-ahụkarị, e nwere ọtụtụ ihe ọkụkụ dị na France, a na-amaliteghachikwa iji ọtụtụ osisi mee ihe iji mezuo ya. Otú ọ dị, akụkụ ụfọdụ nke osisi ahụ, nke a na-emekarị maka ememe ntụrụndụ, ka a machibidoro. Nke a bụ ihe atụ dịka okooko osisi si n'aka ụmụ nwanyị - ahihia, ahịhịa, ma ọ bụ wii wii - na resin - havehish, shit. anyị cannabis herbal teas nwere naanị akwụkwọ na ahịhịa. Ndị a dị ntakịrị THC, ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke "ọgwụ" mmanya, site na ịkọ n'anwụ nke na-akpata mmebi nke onye a na CBD, molekul nwere mmetụta ọgwụgwọ dị ike.
Na mgbakwunye, anyị cannabis herbal teas naanị na-ezubere ka e nye ya. THC dị mfe na CBD mgbe iwe ọkụ - ya mere, mgbe a na - eme ya - ọ dị enweghị ihe ize ndụ na-eche mmetụta nwatakịrị ụbụrụ ya site n'iji ya gọọmentị infusions nwere ike ịbanye na ya. Otú ọ dị, uru ndị dị na osisi ahụ dị elu karị, ọgwụ ndị anyị na-amịpụta bụ ndị bara ọgaranya karịa uru ndị na-eme ememe. N'ezie, osisi ahụ na-akwụ ụgwọ maka ala ala THC dị ala site na ịmịpụta CBD na ndị ọzọ nwere ike ịnabinoids. Ntakịrị THC nke dị na ya na-adaba na CBD site n'omume nke anyanwụ na okpomọkụ.
Cannabis herbal teas si feeduthé.com ya mere iwu zuru oke, ha adighi adi ma ọ bụ gbanwee maka ihe ntụrụndụ. Otú ọ dị, ọgwụgwọ ha na-anọgide na-ekwe omume, ma, n'echiche nke onye nke ọ bụla.
3 / Uru nke infusion cannabis
Kemgbe ụtụtụ, a na-eji chin na-emeso ya vomitingọrịa parasitic ọrịa na haemorrhages. Ná mmalite nke narị afọ nke iri na itoolu, a na-ejikarị ya agwọ ọrịa ọgbụgbọ, tetanus, ụkọ, na rheumatism. N'oge a, anyị maara ya dịka ala Njirimara ọgwụgwọ 25 ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na ikwe ka ọgwụgwọ karịa Ọrịa 200 !
Na a cannabis tii tii, enweghi ma obu ihe pere mpe THC, ma karie ihe nile CBD, molekul enweghi nke psychotropic ma n’enye otutu elele. N'ime ihe ndị kachasị dị ịrịba ama, anyị rịbara ama na CBD na-ebelata inflammations, nchegbu, na ọgbụgbọ na ụfụ. Ọ na-ekere òkè n'ịgwọ ọgwụ, na-akpali usoro ntanetị ma gbanwee ịbụ onye ike antioxidant.
Rịba ama: na cannabinoids THC, CBD na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ n'ime ezinụlọ ha dị na mmiri. Ọ bụrụ na ị nweta anyị cannabis herbal teas maka uru nke ọgwụgwọ ha, anyị na-adụ gị ọdụ inye ha mmiri ara ehi. I nwekwara ike iji ha na otu n'ime anyị nri ntụ nri nke tii. N'ikwu ya n'ozuzu, a na-edozi cannabinoids na lipids (abụba abụba dịka mmanụ ma ọ bụ mmiri ara ehi) na ethanol (mmanya).
4 / Medicine: ọgwụgwọ ọgwụgwọ
Ọtụtụ mba na United States na-ekwe ka wii wii na-enyere ndị ọrịa nwere ọrịa na-enweghị ngwọta belata nhụjuanya ha, ma ịṅụ wii wii maka ọgwụgwọ ọgwụ nwere ike ịga n'ihu. Nke a bụ ihe ndị na-eme nchọpụta abụọ nke Californian chọpụtala na ha achọpụtala mkpụrụ osisi nke nwere ike ịlụ ọgụ megide mmepe nke ụkwara cancer. Achọpụta nke ga-emesị chebe ndụ.
"O were anyị afọ 20 iji rute ebe ahụ, ugbu a anyị chọrọ ịga nyocha ahụike dị ka o kwere mee", kwupụtara na Huffington Post onye nchọpụta ahụ Pierre Desprez du California Pacific Medical Center Research Institute. Na United States,Beast ekwughachiri nyocha ndị a nwalere na laboratories kamakwa na ụmụ anụmanụ.
Jide n'aka, nke a abụghị maka ịṅụ nkwonkwo wii wii na ndị ọrịa na - enweghị ngwọta. Okpokoro ahu nke Pierre Desprez na ndi otu ya bu Cannabidiol (CBD), ihe na-egbu egbu na ihe na-adighi emetuta na chin.
Dọkịta Desprez ghọtara na CBD na-eme ihe na-emetụta ID-1, nke na-akpata ọganihu cancer. Deprez anọwo na-arụ ọrụ na mkpụrụ ndụ a ruo ogologo oge mgbe Sean McAllister nọ na-arụ ọrụ na ikike nke cannabidiol, nke dị na ya na-amasị mmasị ndị ọkà mmụta sayensị taa.
Mmetụta dị iche iche nke ọrịa kansa
"Ihe anyị chọpụtara bụ na cannabidiol na-agbanyụ mkpụrụ ndụ ID-1," Desprez gwara The Huffington Post. N'okpuru mmetụta nke CBD, mkpụrụ ndụ cancer kwụsịrị itolite. Desprez na McAllister bipụtara nyocha nke mbụ banyere nke a n’afọ 2007. Kemgbe ahụ, ha enweela ike ịnwale nnwale ahụ n’ime ụlọ nyocha na anụmanụ, ihe ha chọpụtara karịrị ihe ha tụrụ anya ya.
"Anyị malitere inwe mmasị n'ọrịa ara ara," ka Pierre Desprez na-ekwu, "Ma ugbu a anyị maara na cannabidiol na-arụ ọrụ na ọrịa kansa nke ụbụrụ, prostate, na nkenke, ọrịa kansa niile ebe ID-1 gene na-arụ ọrụ. ọrụ nọ n'ọrụ "
“Anyị ahụghị nsị ọ bụla n’etiti anụmanụ ndị a nwalere na laabu ma cannabidiol ejirila ụmụ mmadụ na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. A na-eji CBD eme ihe n'ezie iji mee ka obi erughị ala na ọgbụgbọ dị jụụ, ebe ọ bụ na molekul abụghị ihe na-emetụta ụbụrụ, ndị ọrịa anaghị ata ahụhụ (ma ọ bụ uru, ọ dabere na ha) site na "elu" ọ bụla.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na nlele ahụike bụ ihe siri ike, cannabidiol agaghị ekesa ...
Ịna-enwe ike ịṅụ sịga n'ebughị ụzọ nweta ọgwụ ọjọọ a: ozi ọma a sitere na Israel, ebe ndị mmadụ na-enye 6 000 ohere iji wii wii maka ọgwụgwọ. Ndị ọkà mmụta sayensị nke Israel enwewo ihe ịga nke ọma n'ịzụlite ịmepụta nke cannabis iji mee ihe maka usoro ọgwụgwọ na-enweghị mmetụta emetụ, na-akọ Wednesday 30 Mee kwa ụbọchịMaariv.
Dị ka akwụkwọ akụkọ si kwuo, ọdịdị, isi na uto nke cannabis a agbanweghị agbanwe, mana onye na-ese siga adịghị enwe mmetụta ọ bụla metụtara tetrahydrocannabinol, THC, ihe dị irè nke wii wii.
dị ka Maariv, Tikkun Olam neutralized the effects of THC ma mee ka ndị ọzọ na-akpọ CBD, ma ọ bụ cannabidiol, dị irè n'ịgwọ ọrịa shuga na nsogbu dị iche iche nke psychiatric. Wii wii ọhụrụ na-egbochi mmetụta ahụ riri ahụ na mmetụta nke agụụ na-agụ ndị ọrụ ọgwụ ọjọọ.
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 25, 2021 10:09
MOSQUIRIX, VACCINE ECHICHE AKA NA MALARIA (MALARIA)
Ghọta mmụta nke nwata site n’echiche nke mmụọ
Ụmụ nwanyị abụọ na-eto eto nke Africa na-emepụta akwụkwọ agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ na-enweghị nsogbu
NDETE YALLA, N'ỤLỌ NWA NA WALO (Senegal)